အမျိုးသားတို့အတွက် Skincare ဘယ်လိုလုပ်ကြမလည်း ? | OnDoctor
အမျိုးသားတို့အတွက် Skincare ဘယ်လိုလုပ်ကြမလည်း ?
20 – Confirmed
0 – Recovered
By OnDoctor Editor	 On Dec 16, 2019 Last updated Dec 16, 2019
ဒီတစ်ခါတော့ မမတွေအလှည့်မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်။ ကိုကိုတွေအတွက် လာပါပြီ။
ခုလို တိုးတက်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု အသားရည်ကောင်းမွန်မှုနဲ့ Fashion ကျနမှု smart ကျမှု ကလဲ အများကြီး နေရာယူလာပါတယ်။ အမြင်သစ်တွေ ပွင့်လင်းလာတာနဲ့အမျှ ပိုမိုကောင်းမွန်သပ်ရပ်တဲ့ အသွင်အပြင်ကို လက်ခံလာကြတယ်။ လိုချင်လာကြပါတယ်။ အဲ့အတွက် ဒီဆောင်းပါးလေးက အမျိုးသားတွေကို အကူအညီပေးနိုင်မှာပါ။
” ပုံမွန္ထက္ပိုသန္႔ျပန္႔ေနစရာမလိုဘူး ။ ယောက်ျားလေးပဲကွာ ဒါတွေမလိုပါဘူး..အခြောက်တွေပဲ အလှကြိုက်တာ”
ဒီလိုအယူသည်းပြီး လက်ခံထားတာဟာ ခုခေတ်မှာတော့ အရမ်းကို outdated ဖြစ်နေပါပြီ။ ခုဆိုရင် ၂၀၁၈ ရဲ့ December ကို ရောက်နေပါပြီ။
အဲ့တော့ မိမိကိုယ်မိမိ new version နဲ့ မြင်ချင်တဲ့ အမျိုးသားများအတွက်
နေ့စဉ် Skincare Steps များ ကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
၁။ အမျိုးသားတွေက ပင်ကိုသဘာဝအရကို အဆီနဲ့အညစ်အကြေးပိုထွက်ပြီး ချွေးပေါက်တွေထဲမှာပါ နက်ရိုင်းစွာ ရှိနေတတ်တာကြောင့် မျက်နှာသစ်ဆေးကောင်းကောင်းလေး တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ် ။ အမြှုပ်များများထွက်ပြီး အညစ်အကြေးတွေ အားလုံးကို သေချာ သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့ Facial Foam ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ် ။ Activated Carbon, Activated charcoal နဲ့ ရွှံ့ဆေးကနေထုတ်တဲ့ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ တွေက အညစ်အကြေးစုပ်ယူမှု အားကောင်းပြီး အမျိုးသားအများစုနဲ့သင့်တော်မှုရှိပါတယ်ရှင်။ဆပ်ပြာတုံးတွေ ကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာတွေနဲ့ မျက်နှာသစ်တာကိုတော့ လုံးဝရှောင်ရပါမယ်။
၂။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် basic skincare steps က တိုနာလိုပေမဲ့ အမျိုးသားတွေအတွက်ကတော့ တိုနာသုံးတာထက် After shave ကောင်းကောင်းရွေးသုံးပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ် ။ အခုနောက်ဆုံး update ဖြစ်တဲ့ brand တွေမှာ after shave တွေကတစ်ခါတည်း toner effect ကိုပါ ပေါင်းပေးထားတာကြောင့် အဲ့လို product မျိုးကို ရွေးသုံးပေးသင့်ပါတယ်ရှင်။
၃။ နောက် step ကတော့ Skin Moisturizer သုံးဖို့ပါ ။ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့က မျက်နှာအသားရည်က ပူလည်းပူတတ်တယ်၊ Cream တွေ နို့ရည်တွေလိမ်းပြီးရင်လည်း စေးကပ်ကပ် ဖြစ်တာကို မကြိုက်ကြတာရယ်၊step တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် လိမ်းနေရတာကို စိတ်မရှည်တာ ကရိကထများတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်တာမို့ Toner > Moisture နဲ့တစ်ခြားလိုအပ်တာလေးတွေ ၂ ခု ၃ ခုရောပေးထားတဲ့ All in one product တွေကို ရွေးသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ခုလိုဆောင်းရာသီမှာဆိုရင် အစိုဓာတ်အားကောင်းကောင်း ပေးနိုင်တဲ့ All In One Gel moisturizer ကို ရွေးသုံးပေးတာက အဆီတဝင်းဝင်းနဲ့ ကြည့်ရဆိုးတဲ့ skin အခြေအနေကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ နောက်အမျိုးသားတွေ မေ့လေ့ရှိတာက suncare ပါ။ suncare ကိုလည်း သီးသန့်မလုပ်ချင်ရင် suncare ပါပါတဲ့ all in one product တွေ စျေးကွက်ထဲမှာ ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။
၅။ နောက်တစ်ချက်က တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးပါ။ အမျိုးသားတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေလောက် အလှပြင်စရာမလိုပေမယ့် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကတော့ ဘယ်အမျိုးသားမဆိုဂရုစိုက်စရာလိုပါတယ် ။ ဗောက်ကင်းတဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ ဦးရေပြားနဲ့ဆံပင် ၊ အဆီတဝင်းဝင်း မဟုတ်တဲ့ မျက်နှာအသားအရေ ၊ ချွေးနံ့ခန္ဓာကိုယ်ချေးညှော်ကင်းပြီး ခြေသည်းလက်သည်း သန့်ရှင်းမှုစတဲ့အားလုံးဟာ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးပါပဲ ။ ဒါတွေကိုဂရုစိုက်သန့်ရှင်းအောင်ေနလို့ လှချင်စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း အမျိုးသားအားလုံးကို သိစေချင်ပါတယ်ရှင့်။
ကဲဒီလောက်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုလဲစိုက်ချင်တယ်။ ဘယ်ကစပြီး ဘယ်လို ဂရုစိုက်ရမလဲ မသိတဲ့ အမျိုးသားတွေအတွက် ဒီဆောင်းပါးလေးက အကူညီပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။
ဆားဝက်ခြံကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအတွက်…
Skincare နဲ့ဆိုင်တဲ့ အမေးများတဲ့ အမည်းစက် ပြဿနာ..
ကလေးရဲ့ အပြုအမူဆိုးတွေကြောင့် မျက်စောင်းထိုးခံရတဲ့…
ဂရုစိုက်ကြင်နာတတ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုသင်ပေးကြမလဲ
ကိုယ်ခံအားစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ ???
လူ၊ သွားတိုက်တံ၊ သွားတိုက်ဆေး နဲ့ လှပတဲ့ အပြုံးတွေ